“Nandravarava” An’i Obama Ny Vaovao Fanakatonana Ny McDonald Farany Teo Tao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Septambra 2014 6:56 GMT
Manankarena fomba amam-panao ny aterineto Rosiana amin'ny fananganana ny kaontin'ireo politisiana fantadaza hamoronan-tantara. Tsy isalasalana fa anisan'ny mpamokatra malaza indrindra sy be traikefa amin'izany i Maksim Kononenko, ilay nanangana ny Vladimir.Vladimirovich.ru, bilaogy voafahana ara-potoana izay mampiseho ireo andian-tantara noforonina sy mampihomehy mikasika ny fiainanan'i Vladimir Poutine amin'ny maha-filohan'i Rosia azy. (Niantsafa tamin'i Kononenko ny RuNet Echo tamin'ny taona 2012) Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny bilaogy madinika, niteraka kaonty maka tahaka tsy hita isa tao amin'ny Twitter ny fitiavan'ny Rosiana tantara fohy manesoeso, ka ao ireo tena manan-talenta tahaka an'i @Fake_MIDRF, @heil_girkin, @LevSharansky sy ny sisa hafa.
Tsy nanafoana ireo tantara fohy manesoeso anefa ny Twitter. Mbola afaka mahita azy ireo eto sy ao amin'ny aterineto ianao, satria manome aingam-panahy ny sasany ny zavamisy ankehitriny. Nanaitra ireo Rosiana mpanesoeso ny fanafihan'i Rosia ny sehatry ny sakafo maivana McDonald amin'izao fotoana izao, iray amin'ireo sehatra ahafantarana an'i Etazonia indrindra, raha maharikoriko azy kosa ny fanondranana ny vokatra. Raha nakaton'ny governemanta ireo toerana malaza misy ny McDonald ao Moskoa tamin'ny volana lasa teo, mailaka avy hatrany ireo mpisera RuNet nanesoeso, nizara ny sarin'ireo hopitaly maloto, tsy maharototra mpanara-maso ny sehatra ara-pahasalamana ny fijerena azy ireo.
Ilya Klishin, lehiben'ny famoahan-dahatsoratra ao amin'ny TvRain.ru.
Rehefa avy nandondona tamim-pitandremana, niditra tao amin'ny biraon'ny filoha Obama ilay mpanampy. Mbola tovolahy tokoa izy – somary malalaka ny eo amin'ny soroky ny palitaony lafovidy. Nitondra fampirimana taratasy miloko manga misy sary voromahery avoavo eo amin'ny hidiny izy. Nanohy namaky antonta-taratasy ny filoha, izay mipetraka eo amin'ny biraony. Tsy nitodika tany amin'i Logan (izany no iantsoan'ny olona ny mpanampy) mihitsy izy.
Ninia nikohaka i Logan mba hisarika ny filoha.
“Hay Logan ihany io. Omeo ahy iny. Lazao ahy izay noentinao ao anatiny, hoy i Obama, mamomamo taorian'ny fito taona niasa tao amin'ny Lapa-fotsy, manao izay hitsikiana.
“Tsy fantatro akory na dia ny fomba fametrahana ity aza,” hoy ilay mpanampy, sady manokatra ilay fampirimana taratasy ary nijery ny antonta-taratasy tao anatiny.
“Atombohy ny resaka.”
“Eny, izany hoe … Andriamatoa, nanakatona McDonald’ hafa ny fitsarana tao Ekaterinbourg,” hoy i Logan niboredika.
“(Ompa reny) …”sambany nanompa tao amin'ity Birao Boribory Lavalava ity ny filoha. Nanjary nangina ilay mpanampy, mivembembena tsy mahazo aina ary miondrika amin'ny gorodona.
“Mbola misy hafa?” hoy i Obama nanontany.
Nisy tavoahangin-dranomainty nisidina tsinahy nankeny amin'ny rindrina. (Fanomezana avy amin'ny mpanjaka vavy izany.) Niraraka tamin'ny taratasin'ny rindrina ny ranomainty. Naka seza i Obama ary nanakona ny tavany tamin'ny tanany. Nihevitra i Logan fa naheno azy nitomany.
“Vita isika, Logan, azonao ve izany? Voasazy isika ankehitriny. Voasazy. Isika. Izany no dikany. Tsy afa-mihaino zavatra hafa aho. Mivoaha teo. Hiantso an'i Vlad aho. Hitolo-batana isika. “